Abaalmarinta Caddaaladda - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Sharciga Ogeysiiska Qarsoodiga Arrimaha Gaarka ah
Hawlaha maamulka shabakadda internetka dartood, waxaa la uruuriyaa macluumaad loo adeegsado ujeeddo tirakoob. Bogga internetka ee Abaalmarinta Caddaaladda la gaaray waa barnaamij loogu talagalay in lagu sameeyo tirakoob kooban oo ay ujeeddadoodu tahay in la qiimeeyo macluumaadka muhiimka ah iyo kuwa aan muhiimka ahayn ama si loo ogaado waxqabadka nidaamka ama meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan. Waxyaabaha soo socda ayaa ah macluumaadka la helay ee ku saabsan booqashadaada shabakadda internetka. magaca shabakadda internetka aad ka gasho bogga Abaalmarinta Caddaaladda la Gaaray (tusaale ahaan, “aol.com” haddii aad ka soo galayso America Online) iyo taariikhda iyo saacadda aad gasho shabakadda internetka. Haddii aad doonayso in aad macluumaadka gaarka ah inoogu soo gudbiso xag email ah, waxaannu ka soo jawaabi doonaa emailkaaga oo kaliya.
Ujeeddo ay ugu wacan tahay amniga iyo in dadka isticmaala ay adeegga wada heli karaan, barnaamijka wuxuu Abaalmarinta Caddaaladda la Gaaray adeegsadaa barnaamijyada soofweerka si loo kormeero dhaqdhaqaaqa nidaamka socdaalka loona ogaado wixii doonaya in fasax la’aan ay macluumaad cusub geliyaan ama wax ka beddelaan macluumaadka halkaasi ku yaal ama ay dhibaato u geystaan. Waxaa mamnuuc ah in la isku dayo fasax la’aan in macluumaad halkaasi la geliyo ama wax laga beddelo adeegga waxaana suuragal ah in la marsiiyo ciqaabta u dhigan Sharciga Been-abuurka iyo Ku Xadgudubka Koombiyuutarka ee 1986. Waxaa suuragal ah in macluumaadka ay baaritaan la oggolaaday u adeegsadaan ciidanka nabadgelyada. Wixii ka baxsan sababaha kor ku yaal, ma jiro isku day kale ee la doonayo in lagu ogaado shakhasiyaadka isticmaala shabakadda ama cadooyinka ay leeyihiin.
Waxaa mamnuuc ah isku day kasta oo jebinaya Sharciga Been-abuurka iyo Ku Xadgudubka Koombiyuutarka Aan la Fasixin ee macluumaad cusub lagu qoraayo iyo/ama wax ka beddelidda macluumaadka ku yaal shabakadaha internetka waxaana dhaceysa in maxkamad loo gudbiyo sida waafaqsan Sharciga Been-abuurka iyo Ku Xadgudubka Koombiyuutarka ee 1986 iyo Qaanuunka 18 U.S.C. Qoddobka. 1001 iyo 1030.
Lifaaqa Shabakadaha Internetka ee ka Baxsan
Lifaaqyada shabakadaha internetka ee ka baxsan Dawladda Dhexe ee Mareykanka ama ganacsiga, shirkadda, ama magacyada shirkadaha ku yaal shabakadda internetka Abaalmarinta Caddaaladda La Gaaray waxaa loogu talagalay dadka akhrista. isticmaalka noocasi ah macnaheedu ma aha in Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka ama barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda ay fasaxayaan ama taageerayaan shabakadda internetka, alaabta, ama adeegga gaarka ah.
Soo Uruurinta Macluumaadka
Waxaannu uruurinaa macluumaadka soo socda:
Waxaad gujisaa macluumaadka taxan
Qaybaha ka tirsan Nidaamka ay koombiyuutarada wax isku dhaafsadaan (HTTP protocol elements)
Waxaa macluumaadkan loo adeegsan doonaa ujeeddooyinka soo socda:
Dhammeystirka iyo taageeridda hawsha haatan.
Maamulka shabakadda internetka iyo nidaamka.Daraasadda iyo Horumarinta.
Waxaa macluumaadkan isticmaali doonaan barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda la Gaaray iyo qaybaha ka tirsan.
Sharraxaadda soo socota ayaa loo bixiyay sababta macluumaadka loo uruuriyo:
Shabakaddayada internetka waxay uruurisaa diiwaanka gelitaanka uu macluumaadkan ku yaal.
Kaydka Macluumaadka Macaamiisha
Kaydka macluumaadka macaamiisha (Cookies) waa tiknoolojiyad aad u adeegsan karto in aad shabakadda internetka ka hesho macluumaad gaar ah. kaydka macluumaadka macaamiisha waa nooc ka mid ah noocyada macluumaadka shabakadda internetka u soo gudbiso barnaamijka internetka lagu galo, suuragal ahna in kombiyuutarkaada lagu kaydiyo. Waxaad sameyn kartaa qaab barnaamijka internetka lagu galo uu ku ogeysiiyo haddii aad hesho kaydka macluumaadka macaamiisha (cookies), waxaadna helaysaa fursad aad ku oggolaanayso haddii aad aqbalayso.
Innagu ma adeegsano kaydka macluumaadka macaamiisha (HTTP cookies).
Dulmarka Qorshe Hawleedka-Ishaysta
Nidaamka is-haysta waa nooc ka mid ah nidaamka P3P kaasoo soo koobaya waxa uu nidaamka ka odhanayo kaydka macluumaadka macaamiisha. Maadaama aysan arrintaan wax ka sheegin isticmaalka kaydka macluumaadka macaamiisha, ma jiro qorshe hawleed la soo koobay ee nidaamkan ku saabsan.
Wuxuu nidaamku sheegaye isticmaalka macluumaadka macaamiisha “HTTP Cookies” waxay ku taal qayb kasta oo qorshe hawleedka ka tirsan. Qaybtan macluumaadka ka tirsan waxaa laga helayaa “Macluumaad joogta ah”